Qaar ka mid ah amarrada AirTags waa la horumarinayaa | Waxaan ka socdaa mac
Dhowr saacadood ka hor ayaan faallo ka bixinay isla qodobkan in Apple AirTags ay helayaan daahitaanno waqtiyada gaarsiinta iibsadayaashooda. Markan waxaan ka hadlaynaa waxa ka soo horjeedda, adeegsadayaasha aan ka tagin iibsashada maalinta la bilaabay ama maalmaha soo socda ay helayaan ogeysiisyada shirkadaha gaadiidka ka hor imaanshaha amarkaaga.
Waxaan awoodnay inaan tan ku xaqiijinno sheekadeena Telegram #podcastApple taas oo dhowr isticmaale ay ka heleen ogeysiis shirkadda gaadiidka ee leh imaatinka alaabtaada maalinta xigta 28, Arbacada soo socota.
Intooda badan isticmaaleyaashan waxay lahaayeen amarka loo dhigay Jimcaha soo socda, Abriil 30. Xaaladdan oo kale, waxay u muuqataa inay imaan karto wax yar ka hor sidii ay filaysay shirkadda Cupertino lafteeda. Caqli ahaan taasi kuma dhacdo dhamaan isticmaaleyaasha kuwaas oo soo iibsaday AirTags laakiin wax yar soo iibsaday oo aan la soo jeedin in shixnadaha soo socda ay heli karaan horumar weyn oo ku saabsan waqtiyada dhalmada, waan arki doonaa
Sidii aan horey uga faallaynay, kacaankii Celtic wuxuu umuuqdaa inuu lahadlay dadka isticmaala Apple mowjad weyn, isticmaalayaashu waxay u jeesanayaan inay iibsadaan badeecadan oo ay shirkaddu soo saartay 20-kii Abriil. Waxaa macquul ah in qaar badan oo ka mid ah isticmaaleyaashani ay iibsashada waligood xiise u yeelayaan maxaa yeelay qiimaheeda wuxuu la mid yahay kan aaladaha kale ee bixiya waxqabad la mid ah sida AirTags laakiin leh kala duwanaansho caan ah oo dheellitirka ka dhigaya wax soo saarka shirkadda Cupertino.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Qaar ka mid ah amarada AirTags waa la horumarinayaa
Waxaan ka mid ahaa dadkii SMS-ka ka helay DHL, laakiin maanta waxaan helay SMS kale oo qoraalkan la socda:
«Gacaliye Macaamiil APPLE, Aynu ka raali galino cilladda si khalad ah aan uga helnay Qoraal DHL oo ku saabsan amarkaaga APPLE. Fadlan iska indha tir oo xaqiiji amarkaagii hore ee APPLE. Mahadsanid
waxay umuuqataa inay ahayd "fashil" DHL ...
La heli karo watchOS 7.4 oo ay ku jiraan furitaanka iPhone-ka markii aad maaskaro xirneyd